Shiinaha Warshad Mashiinka Calendering Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida | Sunkia
Quudinta waraaqaha waxay qaadataa nooca ugu dambeeya ee warqad-quudin-wax ku ool ah; faakiyuum nuugid warqad deggan, buuq yar; hal saxan oo saxan bir ah oo saxan-riix ah ayaa keydiya shaqaalaha iyo waqtiga waraaqaha isugeynaya, waxtarka shaqada ayaa la hagaajiyay; qaadista nooca qaadista-dayactirka iyo booska nadiifinta waa mid ballaaran oo habboon.
Feed Quudinta waraaqaha waxay qaadataa nooca ugu dambeeya ee warqad-quudin-tayo sare leh; faakiyuum nuugid warqad deggan, buuq yar; hal saxan oo saxan bir ah oo saxan-riix ah ayaa keydiya shaqaalaha iyo waqtiga waraaqaha isugeynaya, waxtarka shaqada ayaa la hagaajiyay; qaadista nooca qaadista-dayactirka iyo booska nadiifinta waa mid ballaaran oo habboon.
Eye Isha korontada ee joogsiga saxanka birta ah ee la keenayo, isticmaal isha korontada dheer ee dibada laga keeno, ka fogow isha korontada inay ku dhacdo heerkulka sare, iyo kordhinta nolosha adeegga.
58kw (Nooca kuleylka korontada), 15kw (Snooca kooxda)
60kw (Nooca kuleylka korontada), 15kw (Nooca uumiga)
Qiyaasta mashiinka (L * W * H) mm
Hore: Mashiinka Laminating Xawaaraha Sare ee Tooska ah oo leh mindi duulaya (xabag biyo ku saleysan / xabag saliid leh / filim horay loo duubay)
Xiga: Duub otomaatig ah si loo duubo Mashiinka Shaybaadhka
Mashiinka jeexdin otomaatiga ah